လိမ်လည်/ရိုက်စားမှု များကို သတိပြုပါ | Codashop Blog MM
Home Guides လိမ်လည်/ရိုက်...
လိမ်လည်/ရိုက်စားမှု များကို သတိပြုပါ
မင်္ဂလာပါ Codashoppersများခင်ဗျာ၊ သင့်အား Scam(သို့) လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းများ မခံရ/မကြုံစေရန် သတိပြုကာကွယ်ပေးရန်မှာ အလွန်အရေးပါလျက်ရှိပါသည်။ မီလီယာန်နှင့်ချီ ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဥ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေသော Companyကြီးတစ်ခုအနေဖြင့် နေ့စဥ် Scammersများ၏ လိမ်လည်ခံရမှု ဆိုင်ရာ သတင်းReportများကို လက်ခံရရှိလျက်ရှိပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် မိမိ အလိမ်ခံရပါသလဲ?
Scammerအများစုသည် Email, SMS (သို့) အသင့်ရှိ messageများစသဖြင့် Codashop အယောင်ဆောင်သော Linkအတုများအသုံးပြုပြီး သင့်အားဝယ်ယူမှုဆောင်ရွက်ရန် လိမ်လည်ဖျားယောင်းလျက်ရှိပါသည်။ [မှတ်ချက်] Codashopမှ Email(သို့)SMSမှတဆင့် သင့်အား သင်၏ဖုန်းနံပတ်(သို့)ဘေလ်နံံပတ်၊ မှတ်ပုံတင် ကုတ်နံပတ်၊ OTPကုတ်နံပတ်၊ ဘန်အကောင့် password (သို့) E-wallet PINကုတ်များကို တောင်းခံံခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါ။
[သတိ]Scammersများသည် သင့်ထံမှ၄င်းအချက်အလက်များ ရရှိခြင်းဖြင့် သင့်Creditကတ်(သို့)Contactနံပတ်များ(သို့)E-wallets အကောင့်များ အတွင်းဝင်ရောက်၍ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော လိမ်လည်ဝယ်ယူမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ပုံမှန် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော လိမ်လည်/ရိုက်စားမှု များ
Reportအများစုမှ ပုံမှန်လို ကြုံတွေ့ရသော အလိမ်လည်ခံရမှုပုံစံမှာ-အယောင််ဆောင်Websitesများအသုံးပြုကာ သင်၏ဖုန်းနံပတ် အတည်ပြုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဆုလတ်များရရှိနိုင်ကြောင်း လိမ်လည်ဖျားယောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်အလိမ်မခံရစေရန် ဤအချက်လက်များကို အထူးသတိပြုမှတ်ထားရန်မှာ အရေးပါလှပါသည်။အကယ်၍ သင်၏ငွေချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အခြားတယောက်အားဖြင့် သွေးဆောင်ခိုးယူခံရပါက၊ သင်၏ ဖုန်း/အကောင့်နံပတ်စသဖြင့်ကို Block/ပိတ် ရန် ကျေးဇူးပြု၍ သက်ဆိုင်ရာ ဘန် (သို့)Telco Company(သို့) Codashopထံသို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ CODAရဲ့ လက်တွဲTelco နှင့် E-Wallet Companyများမှ အသုံးဝင်သော အကြုံပြုချက်များမှာ-
MPT – Customer Protection Initiative on Mobile Phone Scams
Telenor – Asia’s Top Internet Scams and How to Stay Safe
Codashop Myanmar၏ တရားဝင်ဖြစ်သော ဆိုဒ်များမှာ-
မှတ််ချက်။ ။ Codashop APK (သို့) Applicationဟူ၍ မရှိပါ။ နောက်ထပ် အချက်အလက်များ (သို့) Scammer Report လုပ်ဆောင်ရန် ဆက်သွယ်လိုပါက ဤ လမ်းညွန်လင့်ခ် မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။
သတိဝီရိယ နှင့် အတူ ပျော်ရွှင်စွာGamingနိုင်ပါစေ!
Previous articleအသစ္ထြက္လာတဲ့ Valir ရဲ႕ Skin အသစ္အေၾကာင္း
Next articleသုံးစွဲသူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုဟာ နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။